Myanmar Blog and myanmar font — MYSTERY ZILLION
447 Mobile Devlopment
206 other mobile
Myanmar Blog and myanmar font
ကျွန်တော်တို ့...blog တစ်ခု လုပ်သည် ဖြစ်စေ..ဆိုဒ်တစ်ခုလုပ်စေဖြစ်စေ မြန်မာဖေါင့်အခက်အခဲ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလို ရှိတဲ ့..နေရာမှာ ကျွန်တော်ကတော ..မြန်မာဖေါင့်ကို ဘယ်လို ရအောင်လုပ်လဲ ဆိုတော ့..သိပြီးသားလူတွေ လည်း သိမှာပါ။
wordpress ကို software နဲ ့..မိမိ ယူထားတဲ့subdomain ဖြစ်စေ.. domain ဖြစ်စေ..တစ်ခုခုပေါနော်
အဲဒီအောက်ကို ရောက်အောင်.. install လုပ်ပါတယ်။ ပြီးရင်..သူရဲ့database ကို ဖျက်ပါတယ်။.
ပြီးရင် database အသစ်ယူပြီး.. htdoc အောက် က wp-config.php ကို ဖျက်ချလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ဆိုဒ်ကို ခေါ်တဲ ့အခါမှာ.....wp-setup တတ်လာပါတယ်။အဲဒီမှာ ကိုယ်ယူထားတဲ့database အသစ်နဲ ့..သွားပေါင်းပေးတဲ ့..အခါမှာ..မြန်မာဖေါင့်(UTF-8)ဟာ...အော်တို ရပါတယ်..ခင်ဗျ။
အခု..အဲဒီလို မရတော ့ဖူးခင်ဗျ..ဘာဖြစ်လို ့လဲ မသိပါဖူး။ database ကို ဖျက်ပြီး/wp-config.php ကို ဖျက်ပြီး ကိုယ်ဆိုဒ်ကို ခေါ်တာနဲ ့...wp-setup မတတ်လာပဲနဲ ့။
Connection to server ဘာညာသရကာ..နေကြာ။ကွာစိ။တောင်ကြီး ပဲ လှော်။
failed (The server is not responding.)
ပဲ ဖြစ်နေတယ်ဂျာ။ တော်တော်စိတ်ညစ်ဖို ့ကောင်းတယ်။
အဲဒီလို ဖြစ်နေတာနဲ့ဖျက်လိုက် ပြန်လုပ်လိုက်နဲ ့..မှားပြီး..အရင် မူလလက်ဟောင်း လူပျံတော်ပတ္တမြား အဲလေ..ဟင် ့..မှားလို ့...အရင်ဆိုဒ်ကို ပါ wp install သွားလုပ်မိတယ်သေရောဟင့်..database ပါပျောက်ထွက်သွားပြီး..လက်တင်.ဘာညာ ၁ တွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။utf-8 တွေ ပျောက်ကုန်ရော..ဟင် ့
ဘယ်လို မှ လုပ်မရတဲ ့အဆုံး..ကိုမင်းလွင် သုံးနေကြ..မန်နူဂျယ်...အင်စတောလေးနဲ ့လုပ်မိပါတယ်။
file manager ပါ
Connection to server file-managers.net failed (The server is not responding.)
ဟင် ့..သိသူများရှိရင် ...ပြောကြပါအုံးဂျာ..တော်တော်ဘူတွားတယ်။ ။
Data base မှာ utf 8 ပြောင်းရင်ရပါဘီ..
တေနာနော်..နင်နော်..ဟင်းဟင်း နော်..တွေ ့မယ်..ဟွန် ့..
မရပါဖူးဆို..ရှိခိုးဦးချ ကန်တော ့တောင်းပန်လည်း.မရပါလား...ဟင်းဟင်း
တွားကြည် ့..ဟွန့်html နဲ ့ချထားတာ..ဟွန် ့
wp ဘယ်လို မှ မရလို ..အဟီး :D
Free hosting များ မှ net2ftp က တစ်ရက် ကို ဘယ်လောက် bandwidth ဆိုတာလဲ ရှိတေး
တယ်လေ.. ပြီးတော့2 MB ထက်လဲ ပိုတင်လို ့မရဘူးး
byethost က net2ftp မှာ wp တင်ချင်တာ2MB ကျော် တာနဲ့အပိုင်းလေး တွေ စိတ်
honeycafe wrote: »
ဆရာသမား...ဘယ်လို တင်တင်..ရတယ် Wp ကို ၄ ပိုင်းပိုင်း ပြီးတင်လည်း Database ကို အသစ်ဆောက်ပြီး..ချိတ်၇တာပဲ..အခုဟာက..... Database ချိတ်မဲ ့အပိုင်းမပြောနဲ့WP setup တောင်မတတ်လို ့ဘူနေပါတယ်ဆို..ဆရာတမားကတော ့..နောက်ပြီ
လုပ်ကြပါဦး သိတဲ ့သူများ..မရှိကြဖူးလားခင်ဗျား။ ။
ဇူးဇူး .. အဲဒါ Connection ပြသနာထင်တယ် .. ကွန်နက်ရှင် ကျနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် .. ဒါမှမဟုတ် .. Free ပေးတဲ့ Hosting ဘက်ကလည်း Error ဖြစ်နိုင်တယ် .. DB တွေ Wp တွေကို မကြည့်ခင် .. ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Internet Connection ကိုနဲနဲ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်အုံး .. (အရင်ဆုံး ကိုညီကိုလဲ မေးကြည့်ပါအုံး .. သူဘာတွေ Denied လုပ်ထားလဲလို့ .. ) :):)
မြန်မာပြည်က ကွန်ပြူတာ သမားတွေ Error ရှာတဲ့နေရာမှာ ကမ္ဘာထက်တော့ ပိုတာတစ်ချက်ရှိတယ် .. Error တစ်ခုခုများတက်လို့ Error နောက်ကိုချည်း မဲလိုက်မနေနဲ့ .. လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကလည်း ဖောက်တက်သေးသကိုး .. အော် .. ဒုက္ခ .. ဒုက္ခ ..
Ko Char wrote: »
ဇူးဇူး .. အဲဒါ Connection ပြသနာထင်တယ် .. ကွန်နက်ရှင် ကျနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် .. DB တွေ Wp တွေကို မကြည့်ခင် .. ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Internet Connection ကိုနဲနဲ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်အုံး .. (အရင်ဆုံး ကိုညီကိုလဲ မေးကြည့်ပါအုံး .. သူဘာတွေ Denied လုပ်ထားလဲလို့ .. ) :):)
ဟုတ်တယ်ကိုချာရေ...ဇူးလည်းထင်တယ်..Torncity ကို ၀င်လို ့ကို မရတာ...ဘဲကြီးက DNS ကို မပေးခိုင်းထားဖူးလေ..အဲဒီတော ့..DNS falied တွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော